Ibn Kasiir aaya tana ilaalchise ni jedha: [Abbaa fi haati kee] mushrikoota ta’anii amanti [shirkii] isaanii akka hordoftuuf yoo sitti qabsaa’an, of eeggadhu, of haa eeggatan, kana keessatti isaaniif tole hin jedhin. Guyyaa Qiyaama deebiin keessan gara Kiyya. Isaaniif tola oolu keetii fi Islaama irratti obsuu keetiif mindaa siif kafala. Osoo namoota hundarra addunyaa keessatti kan isaanitti dhiyaattu taateyyuu, garee haadhaa abbaa keeti waliin osoo hin ta’in* saalihota (warroota gaggaarii) waliin si kaasa. Guyyaa Qiyaamaa namni nama jaallatu waliin kaafama. Kana jechuun jaalala amantiiti. Kanaafi Rabbiin olta’e ni jedha: “Kanneen amananii fi hojii gaggaarii hojjatan, dhugumatti saalihoota keessa isaan seensifna.”
*Kuni abbaa fi haati kaafira yoo ta’aniidha. Abbaa fi haati kaafira ta’anii yoo du’an garee kaafiraa waliin kaafamu. Ilmi mu’mina yoo ta’e immoo abbaa fi haadha irraa addaan bahuun mu’mintoota waliin kaafama. Gama biraatiin abbaa fi haati mu’mintoota yoo ta’an, garee mu’mintoota waliin kaafamu. Ilmis mu’mina yoo ta’e isaan waliin kaafama.